MaWarriors 9 vane Covid-19 | Kwayedza
MaWarriors 9 vane Covid-19
31 Dec, 2020 - 14:12	 2020-12-31T14:14:01+00:00 2020-12-31T14:10:24+00:00 0 Views
SANGANO reZimbabwe Football Association (Zifa) razivisa kuti rambomisa gadziriro dzechikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors dzekuenda kumakwikwi eAfrican Nations Championship (CHAN) zvichitevera kubatwa kwakaita vatambi vacho vapfumbamwe nechirwere cheCovid-19.
Muchinyorwa chakatumirwa neZifa, competitions manager ari zvekare mukushi wemashoko wesangano iri — Xolisani Gwesela — anoti vatambi vose vemaWarriors vainge vakasarudzwa kupinda muchikwata chaZdravko Logarusic nemusi weMuvhuro vakaongororwa pavakadzoka kubva kuzororo reKirisimasi zvikaonekwa kuti vapfumbamwe vavo vane chirwere ichi.
“Tichitevedzera mitemo, vatambi vose nevaraidzi vacho vakavhenekwa nemusi weMuvhuro (28 Zvita) vachibva kuzororo reKirisimasi ndokuonekwa kuti vapfumbamwe vavo vane Covid-19,” anodaro.
Gwesela anoenderera mberi achiti vose vaonekwa kuti vane denda iri vaziviswa uye vave kutevedzera mitemo yeWorld Health Organisation (WHO) vachimbogara kwavo voga.
Kunyangwe zvazvo vatambi vane chirwere ichi vasina kudomwa nemazita, Gwesela anoti chikwata chemaWarriors chicharamba chiri mukembi asi chisingaite gadziriro.
Mitambo yeCHAN, iyo iri kutambirwa kuCameroon, ichatanga musi wa16 Ndira 2021 uye maWarriors ari muboka reGroup A rine zvikwata zvinoti Burkina Faso, Cameroon neMalawi.
Zvichakadai, kuMalawi, chikwata cheNyasa Bullets icho chinorairidzwa naKalisto Pasuwa kusvika pari zvino vatambi vacho 11 vabatwa vaine Covid-19.